Xisbiga WADDANI Oo Shaki-geliyey Hufnaantii Doorashada Iyo Taageerayaashiisa Oo Rabshado Ka Sameeyay Burco, Hargeysa | Dhamays Media Group
Xisbiga WADDANI Oo Shaki-geliyey Hufnaantii Doorashada Iyo Taageerayaashiisa Oo Rabshado Ka Sameeyay Burco, Hargeysa
Hargeysa (Dhamays) – Guddiga Doorashooyinka Qaranka Somaliland, ayaa weli ku mashquulsan Tirinta Codadkii laga dhiibtay Doorashadii Madaxtooyada ee Isniintii Toddobaadkan ka dhacday Gobollada iyo Degmooyinka Dalka.
Afhayeenka Komiishanka Doorashooyinka Qaranka Siciid Cali Muuse oo Maanta Shir-jaraa’id qabtay ayaa sheegay in la dhamaystiray inta badan Tirinta Codadkii laga dhiibtay Doorashada ee Gobollada Dalka, Sanaaduuqdii Gobollada Dalka qaarkoodna dhawaan soo gaadhayaan Xarunta Komiishanka ee Hargeysa, hawluhuna si wanaagsan ugu socdaan.
Hasa-ahaatee, Xisbiga WADDANI ayaa shaki ka muujiyey Kalsoonida ay ku qabaan sugnaanshiyaha Codadkii laga dhiibtay Gobolka Maroodi-jeex, waxayna gelinkii dambe ee Maanta sheegeen inay hakiyeen wada-shaqeyntii ay la lahaayeen Guddiga Doorashooyinka oo ay ku eedeeyeen inuu ka dhego-adaygay Codsi ah in dib loo tiriyo Codadkii laga dhiibtay Gobolka Maroodi-jeex meelo ka mid ah.
Mr. Afgaab oo ka mid ah Xubnaha WADDANI u qaabilsan la shaqeynta Komiishanka oo shir-jaraa’id ku qabtay Huteelka Imperial ee Hargeysa, ayaa ku dooday inay Xisbi ahaan Shaki ka qabaan Tirada Codadka laga dhiibtay doorashada, gaar ahaan Gobolka Maroodi-jeex, aaminsan yihiina in Waraaqo Foojari ah loo isticmaalay Codaynta “Waxa soo baxaya in Doorashadu ka baxday Nidaamkii Xor iyo Xalaasha ahayd, waxaana soo baxaya in Gobollo badan ku shubasho ka dhacday, sidaa darteed markii aanu codsannay in dib loo tiriyo Codadka oo la hubiyo Raadadka aanu hayno, Komiishanku waxay kaga jawaabeen aamusnaan.” Ayuu yidhi, Mr. Cismaan Afgaab oo WADDANI u qaabilsan Komiishanka, waxaanu intaa ku daray “Sidaa darteed, waxaanu ku wargelinaynaa dhammaan (Xubnaha WADDANI ee Komiishanka kala shaqeynaya Tirinta Codadka) inay hakiyaan (Wada-shaqeynta).”
Guddoomiyaha WADDANI Md. Cabdiraxmaan-Cirro oo Gurigiisa Shir-jaraa’id ku qabtay Caawa, ayaa sheegay in Go’aanka Xisbigiisu xidhiidhka Wada-shaqeyneed ugu jiray Komiishanku yahay mid ay Duruufi keentay, isla-markaana doonayaan in Cabashadooda hoos loo eego, inkasta oo aanu soo hadal-qaadin Waraaqaha Foojariga ah ee Masuulka Xisbigiisa u qaabilsanaa Komiishanku sheegay in loo adeegsaday Cod-bixinta.
Laakiin, Guddoomiyaha Komiishanka Doorashooyinka Somaliland Eng. Cabdiqaadir Iimaan Warsame oo isaguna Caawa Shir-jaraa’id oo Deg-deg ah qabtay ayaa sheegay sheegay inay Diyaar u yihiin inay dhegaystaan Xisbi Kasta oo Cabasho ka qaba Nidaamkii Doorashadu u dhacday.
Guddoomiyaha Komiishanku wuxuu sheegay inay Dacwad ka xigaan Waraaqaha WADDANI soo bandhigay ee ku sheegayo in Cod-bixinta loo adeegsaday, isagoo Dadweynahana ugu baaqay inay is-dejiyaan.
Maxaa ka dhashay Hadalka WADDANI ?
Go’aanka Xisbiga WADDANI ku sheegay inuu joojiyey Wada-shaqeyntii uu lahaa Komiishanka Doorashooyinka ka dib, ayaa waxa Magaalada Burco iskugu soo baxay Dad u badan Dhallinyaro, kuwaasi oo sameeyay dibad-bax Rabshado watay, waxayna Weerarreen Meherado Ganacsi, waxayna burburiyeen Gaadiid, halka ay Jidadka Magaaladana Taayiro ku gubeen.
Dhallinyaradan oo ku qaylinayey Weedho aan wanaagsanayn ay WADDANI-na Taageero ugu muujinayeen, Komiishanka iyo Xisbiga KULMIYE-na ku dhaliilayeen, ayaa markii dambe waxa kala eryey Ciidammada Booliiska, kuwaasi oo adeegsaday Rasaas cabsi-gelin ah oo ay kor u ridayeen. Hasa-ahaatee rabshado kuwaa Burco la mid ah ayaa iyaguna Fiidkii Caawa ka dhacay Xaafadda New Hargeysa ee Magaalada Hargeysa.
Dhallinyaradan oo Rabshaddoodu ku soo fidday Badhtamaha Suuqa Caasimadda Hargeysa, ayaa markii dambe Booliisku dib u caydhsaday oo uu dib ugu celiyey halkii ay markii hore iska soo urursadeen.
Previous: Dawladda Jabuuti Maxay Ka Tidhi Doorashada Somaliland ?
Next: “Xisbigii Guulaystay Wuu Is-Ogyahay, Laakiin….” Sheekh Aadan-Siiro + MUUQAAL